Theatre: A Love Story (2020) | MM Movie Store
၂၀၂၀မှာထှကျရှိထားပွီး ရငျထဲမှာစှဲထငျကနျြစမေဲ့ ဂပြနျအခဈြဇာတျလမျးလေးပါ။နာဂါတာဟာ ပွဇာတျအတှကျ ဇာတျညှနျးရေးတဲ့သူပါ။ သူဟာ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအနနေဲ့ ပွဇာတျအလုပျကိုပဲလုပျကိုငျခဲ့တယျ ။ သူဟာ ပွဇာတျရေးတာကိုအလှနျရူးသှပျတဲ့သူလဲဖွဈသလို သိပျကိုခေါငျးမာလှနျးတယျ ။
တဈနမှေ့ာ ဆာကီဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့တယျ။ သူတို့တှဟော အစမှာတော့ ပွဇာတျကိုအတူတူလုပျခဲ့ကွပမေဲ့ နောကျပိုငျးမှာ နာဂါက ပေးမလုပျတော့ပါဘူး။နာဂါရဲ့ပွဇာတျအလုပျဟာ ထငျသလောကျအလုပျဖွဈမလာတော့ သူ့အဖှဲ့ဟာပကျြစီးသှားတယျ။
နာဂါဟာ ဆာကီနဲ့အတူနပွေီတော့ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကို ကွညျ့ရှုပေးကွပါ ……ဆာကီ နဲ့ နာဂါ ၂ ယောကျလုံးဟာ သကျဆုံးတိုငျထိလကျတှဲသှားနိုငျပါ့မလား …. သိပျကိုစှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အခဈြဇာတျလေးတဈခုကို အပွညျ့အဝခံစားရမှာပါ။
၂၀၂၀မှာထွက်ရှိထားပြီး ရင်ထဲမှာစွဲထင်ကျန်စေမဲ့ ဂျပန်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။နာဂါတာဟာ ပြဇာတ်အတွက် ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့သူပါ။ သူဟာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ ပြဇာတ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ် ။ သူဟာ ပြဇာတ်ရေးတာကိုအလွန်ရူးသွပ်တဲ့သူလဲဖြစ်သလို သိပ်ကိုခေါင်းမာလွန်းတယ် ။
တစ်နေ့မှာ ဆာကီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူတို့တွေဟာ အစမှာတော့ ပြဇာတ်ကိုအတူတူလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ နာဂါက ပေးမလုပ်တော့ပါဘူး။နာဂါရဲ့ပြဇာတ်အလုပ်ဟာ ထင်သလောက်အလုပ်ဖြစ်မလာတော့ သူ့အဖွဲ့ဟာပျက်စီးသွားတယ်။
နာဂါဟာ ဆာကီနဲ့အတူနေပြီတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုပေးကြပါ ……ဆာကီ နဲ့ နာဂါ ၂ ယောက်လုံးဟာ သက်ဆုံးတိုင်ထိလက်တွဲသွားနိုင်ပါ့မလား …. သိပ်ကိုစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အချစ်ဇာတ်လေးတစ်ခုကို အပြည့်အဝခံစားရမှာပါ။